China Stock Nylon Yakadhindwa fekitori uye vagadziri | JW
Rakadhindwa kapeti ndiyo yakasarudzika sarudzo, iyo inopa kutarisisa kune ese maviri mavara dhizaini uye mutengo. Kubatsira kukuru kwechigadzirwa ichi ibhajeti inodhura uye iri kukurumidza mukugadzira.
Rakadhindwa kapeti ndiyo yakasarudzika yakakodzera sarudzo, iyo inopa kutarisisa kune ese maviri mavara dhizaini uye mutengo. Mukana mukuru wechigadzirwa ichi ibhajeti yayo isingadhuri uye kuendesa nekukurumidza.
Chero chero rakagadziriswa dhizaini uye ruvara zviripo zvakadhindwa kapeti, pasina chero muganho pane MOQ yekugadzira.
Isu tinochengeta stock yeanopfuura makumi maviri mavara eakadhindwa kapeti mune ese Qingdao imba yekuchengetera uye Shanghai imba yekuchengetera. Zvese zvigadzirwa zvekapeti yakadhindwa pane peji ndezve stock stock uye mamwe matsva magadzirirwo anozotorwa nguva dzose.
Chigadzirwa Nylon Yakadhindwa Kapeti
Chikamu: 100% Nylon BCF
Kuvaka: Chikamu cheka murwi
Gauge: 1/10　 2K321-2K330 2K331-2K340
Kureba Kwemurwi: 7 mm 8 mm
Murwi Kurema :: 1000 g / m 1,200 g / m
Kutsigira Kwekutanga: PP jira
Kutsigira Kwechipiri: Action shure
Upamhi: 4.00 m
Nguva yokutora: inenge. 15 mazuva kana zvichidikanwa huwandu hwapfuura huripo stock
Pashure: Kapeti Yakagadziriswa
Zvadaro: Nylon Ruvara-Mhepo & Seaway